Amathiphu Wevidiyo Yokuthengisa evela ku-Home Office | Martech Zone
Amathiphu Wevidiyo Yokuthengisa evela ku-Home Office
NgoLwesine, ngoMashi 26, 2020 NgoLwesibili, ngo-Mashi 2, i-2021 Douglas Karr
Ngobunzima obukhona njengamanje, ochwepheshe bebhizinisi bazithola behlukanisiwe futhi besebenza ekhaya, bencike kumasu wevidiyo wezingqungquthela, izingcingo zokuthengisa, nemihlangano yethimba.
Njengamanje ngizihlukanisa ngeviki elilandelayo kusukela umngani wami evezwe kothile othole ukuthi une-COVID-19, ngakho-ke nginqume ukuhlanganisa amanye amathiphu wokukusiza ukuthi usebenzise ividiyo kangcono njengolimi lwakho lokuxhumana.
Amathiphu Evidiyo Ehhovisi Lasekhaya
Ngokungaqiniseki komnotho, kufanele ube nozwela ezinseleleni zawo wonke amathemba namakhasimende. Kufanele ube umthombo othembekile wosizo kuwo wonke amathemba namakhasimende. Amasu esikhathi eside awanakwa njengoba izinkampani zizimela phansi futhi zicabanga ngobuhlakani. Ividiyo iyindlela yokunqoba ezinye zezinselelo zebanga esinazo ngokuxhumeka komuntu, kepha kufanele futhi ukwandise lolo lwazi.
Kwevidiyo, udinga i-mindset, i-logistics, isu lokuthumela imiyalezo, nezinkundla zokukhulisa ukubandakanyeka nomthelela womyalezo wakho.
Ukuzihlukanisa, ukucindezelwa, kanye nokungaqiniseki kungathinta indlela esibukwa ngayo. Nazi izinto ongazenza ukuze uthuthukise ukucabanga kwakho siqu nokuthi ubonwa kanjani ngumbukeli wakho.
Ukwazisa - Ngaphambi kokungena kuvidiyo, zindla ngalokho okubonga ngakho.
Ukuzivocavoca - Asikwazi ukuhamba. Zivocavoce ukusula ikhanda, ukuqeda ukucindezeleka, nokwakha ama-endorphin.
Gqoka Impumelelo –Isikhathi sokugeza, ukushefa, nokugqoka ukuze uphumelele. Kuzokwenza uzizwe uzethemba ngokwengeziwe futhi umamukeli wakho naye azokuthokozela kakhulu.
scene - Ungami phambi kodonga olumhlophe. Ihhovisi elinemibala ethile yokujula nemhlabathi ngemuva kwakho lizomema kakhulu ngokukhanyisa okufudumele.
Ukuphathwa Kwevidiyo Ehhovisi Lasekhaya
Nciphisa noma yiziphi izinkinga ozoba nazo ngekhwalithi yomsindo, ikhwalithi yevidiyo, ukuphazamiseka nezinkinga zokuxhuma. Hlola ihhovisi lami lasekhaya ukubona ukuthi ngitshale imali futhi kusebenza kanjani konke.
Hardwire - Ungathembeli ku-Wifi kuvidiyo nakomsindo, sebenzisa ikhebula lesikhashana kusuka kumzila wakho uye kwi-laptop yakho.
Umsindo - Ungasebenzisi izikhulumi zangaphandle ukulalela, sebenzisa ama-earbuds.üAudio - Umsindo uyisihluthulelo, thola imakrofoni enhle noma usebenzise imakrofoni yakho yehedisethi ukunciphisa umsindo wangemuva.
Phefumula & Nweba - Sebenzisa ukuphefumula okwe-diaphragmatic ngaphambi kwevidiyo yakho ukuze ungalambeli umoya-mpilo. Nweba ikhanda nentamo yakho ngaphambi kokuqala.
Ukuxhumana Kwamehlo - Beka ikhamera yakho ezingeni leso noma ngaphezulu bese ubheka ikhamera kuyo yonke indawo.
Ukuphazanyiswa - Vala izaziso kufoni yakho nakudeskithophu.
Amasu Okuxhumana Ngevidiyo Yebhizinisi
Ividiyo iyindlela enamandla, kepha udinga ukuyisebenzisela amandla ayo ukuze ube nomthelela omkhulu.
Ubungqabavu- Musa ukuchitha isikhathi sabantu. Zijwayeze lokho ozokusho bese ufika ngqo ephuzwini.
Uzwela - Njengoba ungasazi isimo sombukeli wakho, ungahle uthande ukugwema amahlaya.
Nikeza Inani - Kulezi zikhathi ezingenasiqiniseko, udinga ukunikeza inani. Uma uzama nje ukuthengisa, uzobe unganakwa.
Yabelana Ngezinsizakusebenza - ngolwazi olungeziwe lapho isibukeli sakho singazicwaninga ngokujulile.
Nikeza Usizo - Nikeza ithuba lokuthi okulindele noma iklayenti lakho lilandelele. Lokhu akukhona ukuthengisa!
Izinhlobo Zamapulatifomu Evidiyo
I-Webinar, Izingxenyekazi Zenkomfa Nezemihlangano - I-Zoom, i-Uberconference, ne-Google Hangouts konke kuyisoftware yomhlangano omkhulu we-1: 1 noma 1: Imihlangano eminingi. Zingarekhodwa futhi zithuthukiselwe izethameli ezibanzi.
Amapulatifomu e-Social Media Live - I-Facebook ne-Youtube Live ziyizinkundla ezinhle zamavidiyo omphakathi okwabelana nababukeli abaningi.
Amapulatifomu wevidiyo yokuthengisa ne-imeyili - I-Loom, i-Dubb, i-BombBomb, i-Covideo, i-OneMob ikuvumela ukuthi urekhode ngaphambili ngesikrini sakho nangekhamera. Thumela ukugqwayiza nge-imeyili, waziswe, futhi uhlanganiswe ne-CRM yakho.
Ukusingathwa Kwevidiyo - I-Youtube iseyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu! Kubeke lapho bese uyisebenzisa kahle. IVimeo, iWistia, namanye amapulatifomu webhizinisi avelele futhi.
Social Media - I-LinkedIn, i-Twitter, i-Instagram konke kukuvumela ukuthi usebenzise zonke iziteshi zakho zenhlalo ukuze wabelane futhi uthuthukise amavidiyo ngezindlela zawo zomdabu. Qaphela ukuthi ipulatifomu ngayinye inokulinganiselwa kubude bevidiyo yakho.
Ngiyethemba lezi zizokunikeza usizo njengoba usebenza nevidiyo evela ekhaya kulenkinga!
Tags: google hangoutsihhovisi lasekhayaUkumaketha iWebinarinkomfa yevidiyoukucabanga kwevidiyoamapulatifomu evidiyoisu levidiyoamathiphu evidiyoamaqhinga wevidiyo
Kuyini ukufudumala kwe-IP?
Appy Pie App Builder: Umsebenzisi-Nobungane, No-Code App Building Platform